MAROANTSETRA : FANKALAZANA NY ANDRO IRAISAM-PIRENENA HO AN’NY TANORA – Ministère de la jeunesse et des sports
Maro ny hetsika nentina nanamarihana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny TANORA, anisan’izany ny sora-dia, ny rodoben’nyTanora izay niarahana nisalahy tamin’ny Fitaleovam-paritry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena ao Analanjirofo sy ireo fikambanan’ny tanora maro samihafa.
Nandritra ny fandraisam-pitenana nataon-dRamatoa Minisitra lefitra no nanambarany fa manana tombony ny tanora satria tanora ireo mpitondra, miainga amin’ny Filoham-pirenena izay mbola ao anatin’ny fahatanorana ary ny tenany izay reny mpiahy no sady zokin’ny tanora. Ny tanora mahafantatra ny olana atrehin’ny tanora, ny tanora samy tanora no mahay mifampiresaka ary izany no isany nahatongavany tany an-toerana.
Nanentana ireo tanora tao Analanjirofo ny tenany araka izany hifanome tanana amin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara.Teo ihany koa ny famporisihana azy ireo amin’ny fandraharahana mba ahafahan’izy ireo hamorona asa.
Nandritra ny fotoana dia nihaona mivantana tamin’ireo Tanora izy ary nandritra izany no nanambarany ny fahavononany hanatanteraka ny veliranon’ny Filoha ka tsy hisy distrika ho adino. Ho fampivelarana sy fanampiana ireo tanora dia ho laharam-pahamehana ny famahana ny olana eo amin’ny tsy fananan’ireo tanora asa.
Taorian’izany dia nisy ny fijerena ifotony ireo fotodrafitr’asa ho an’ny Tanora teny an-toerana.
JEUX PARALYMPIQUES 2021: VALAN-DRESAKA HO AN’NY MPANAO GAZETY MIKASIKA NY FANDEHANAN’NY DELEGASIONA MALAGASY.